होसियार ! छोराछोरी नपढाए पच्चीस हजारसम्म जरिवाना – दाङ खबर
होसियार ! छोराछोरी नपढाए पच्चीस हजारसम्म जरिवाना
काठमाडौँ, भदौ ८ । के तपाईंले आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै कारणले पढ्नबाट वञ्चित गर्नुभएको छ ? यदि छ भने तपाईंलाई राज्यले कसुरदार ठहर गरी जरिवाना र सजाय दिनेछ ।
बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएको विषयमा कसको कसुर हो भन्ने निर्णय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्नेछन् र उजुरीका आधारमा जरिवाना तोकिनेछ । विधेयकले आगामी २०८५ वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन, कुनै संस्था र निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख गरेको छ । यो प्रावधानले सरकारको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल करीब कूल बजेटको १० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा लगानी भएकामा यो व्यवस्थाले न्यूनतम् १८ प्रतिशत लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
Prevदेवकला बस्नेतको मायालु रिसाएपछि…
Nextखाली पेटमा नखानुहोस् यी दश खानेकुरा
दम्पतीबीचको उमेर अन्तर कति हुनुपर्छ ?
जो मनको आँखाले जगत्लाई हेर्छन्,अनुभूति पनि गरिरहेका हुन्छन्
सरकारी नीतिले निर्माण ब्यवसायी समस्यामा : बलिभद्र राना
गुल्मीको पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुग्यो